Garowe: Gaas oo furay shir ku saabsan hirgelinta sharciga tartanka qandaraasyada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 22 December 2014 22 December 2014
Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Puntland Dr Cabdiweli Cali gaas ayaa maanta oo Isniin ah furey shir looga hadlaayo meelmarinta iyo taabo gelinta sharciga tartanka heshiisyada qandaraasyada, kaas oo ka dhacay caasimadda Puntland ee Garowe. Shirkan waxaa soo qabanqaabiyey Hay’adda Qandaraas bixinta Dowladda iyo Wasaaradda Maaliyadda.
Kulanka ayaa waxaa ka soo qeyb galay Wasiiro katirsan xukuumada Puntland, masuuliyiin ka soday shirkadaha qaata qandaraasyada iyo weliba kuwa bixiya qandaraasyada inta badan laga hirgeliyo guud ahaan Gobolada Puntland.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in ka xukuumad ahaan isbadalkeeda ay ka mid tahay in nidaam wanaagsan oo dadku ay ujeedaan lagu bixiyo canshuuraha si siman looga hirgeliyo dalka, hay’aduhana ay dardar geliyaan shaqadooda.
“Adigu hadaad tahay qandaraas qaate waxaa lagaa rabaa oo kaliyah waa in aad canshuurta iskabixiso, waxaan hiigsanayo ee ah in kaabayaasha dhaqaalaha dalka la hagaajiyo mahelayno hadaydaan canshuurta bixin” Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweynaha ayaa soo hadal qaadey nidaamka musuqa ku dhisan ee mararka qaarkood loo maareeyo qandaraasyada waxaana uu yiri:
“Hadaad tihiin idina kuwa qandaraas bixiyayaasha ah waxaa laydinka rabaa inaad joojisaan musuq maasuqa anagu hay’adii aanu ku helno inay musuq maasuq suubinayso waan la xisaabtamaynaa, waana ogahay in hay’ado badan ay diidanaayeen bixinta canshuuraha rayidka ah iyadoo aad moodo in jeebkooda ay ka bixinayaan”
Dr Cabdiweli Cali Gaas ayaa sheegey in dadka ay ka dhexeyso dowladnimadu oo ay asaas u tahay bixinta canshuuraadka: “Waxa inaga dhaxeeya waa dawladnimada waxaana idinku kala jeclaanaynaa waxaa weeye sidii aad ugu hogaansataan nidaamk, canshuurtana u bixisaan, waana idinku amaanaynaa waana ku tixgelinaynaa intii bixisa”.
Xigasho Xafiiska Madaxweynaha ee Warfaafinta